Nihena hoe ny fahantrana ? | NewsMada
Nihena hoe ny fahantrana ?
Miha antomotra ny fety Krismasy sy ny faran’ny taona. Ho tapitra ny taona 2017 hidiran’ny 2018 indray. Tsy hita soritra loatra ny maha volon’andro fety azy, na somary niato aza ny orana, nefa manombana ny mpamantatra ny toetr’andro fa ho avy indray ny eto an-dRenivohitra sy ny tapany atsinanan’ny Nosy, manomboka anio. Raha jerena eny an- dalambe sy eny an-tsena, mihamitohana toy ny mahazatra ny fifamoivoizana, maro ny fivezivezen’ny olona, saingy toa betsaka lavitra noho ny mpividy ny mpivarotra. Misy efa mandray karama ny sasany; ny hafa miandry ny anjarany fa misy koa ireo tena tsy misy antenaina mihitsy ary maro anisa. Toa raisina ho latsa ny fahenoana fa nihena ho 72% ny fahantrana eto Madagasikara raha 92% izany teo aloha. Tsy namoaka izany tarehimarika izany, aloha hatreto, ny mpanara-maso ny toekarena sy ny sosialy, toy ny Banky iraisam–pirenena, ohatra.
Raha nihena ny fahantrana, midika ho nitombo ve ny sakafo hohanin’ny Malagasy tsirairay amin’ny alalan’ny fatran-tsakafo na ny otrikaina kaloria hohanin’ny tsirairay, na ny vola miditra isam-batan’olona raha tarafina amin’ny 2 dolara, araka ny singam-pandrefesin’ny Banky iraisam-pirenena ?
Amin’io taona 2018 io, toy ny fanao isan-taona, tsy maintsy hifampirary soa ny tsirairay hahatratra ny taona vaovao. Tsy misy maniry ny hietry, ny hihemotra, ny hikororosy, fa maniry ny hihanoka anaty fahasambarana, fahatoniana, fandrosoana ny rehetra. Rehefa tsy hita taratra amin’ny zava-misy anefa izany, zary tenenina sy tanisaina ihany, fa mihanoka anaty fahantrana aloha ny ankamaroan’ny Malagasy, hatreto.
Na izany aza, tsy mety kivy Ramalagasy, na eo aza ny ataon’ny mpanao politika mitondra sy manohitra. Manana ny hohaniny isan’andro, manana ny voninahiny, migalabona amin’ny harena tsy hita pesimpesenina, mihanoka amin’ny fety sy lanonana tsy takatry ny saina.
« Brisons le silence, osons dénoncer…”: Seize jours d’activisme contre les VBG 26/11/2020